Apigenin nwere mamịrị mamịrị, ọbara mgbali n'ịchịkwa, antibacterial, mgbochi mkpali na ọrụ ndị ọzọ
Anyị nwere ọkachamara n’ichepụta nke Natural Cytisine wepụ. Iji bụrụ ndị na-arụpụta ihe, anyị na-echekwa echiche kacha mma.
gentiopicroside bụ ụdị ọcha uzuzu uzuzu, nke dị mfe igbari na methanol na ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ịgbasa na ether.
Ngwaahịa a bụ ihe dị irè nke ọrịa leukemia, nke dịpụrụ adịpụ site na epupụta a mịrị amị nke Isatis indigotica Fort, osisi na-egbu osisi. Ọ bụ otu ụzọ indole mgbochi akpụ ọgwụ.
Rhizoma Drynariae wepụ
chemical Njirimara nke Rhizoma Drynaria fortunei (Kunze) j.sm. Isi ihe na-arụ ọrụ bụ naringin, na mgbakwunye, o nwere ọtụtụ kemịkal, dịka methyl eugenol, protocatechuic acid, beimeishengcao glucoside ọhụrụ, osteoclast dihydroflavonoid glucoside, cycloxylosterol acetate,
na-enyere aka ikesie ike na capillaries anụ ahụ, yana dịka nke a nwere ike inye aka gbochie ọnọdụ nnụnụ. Ọ na-egosikwa ihe ndị na-egbochi oxidant. o nwere mmetụta mgbochi mkpali, ọ nwere ike ijide nguzogide vascular, belata nsụgharị ya, belata mmebi ahụ, na-achụpụ lipids si fa
salicin bụ ihe dị ọcha sitere n'okike na-arụ ọrụ sitere na alaka ma ọ bụ ogbugbo nke Salix babylonica L. site na usoro mmịpụta nke oge a.
Senna Leaf wepụ
Senna bu ahihia ndu nke akwukwo ya sitere na osisi Cassia senna. A na-erekarị akwụkwọ Senna dị ka akụkụ nke tii detox n'ihi na ha nwere mmetụta laxative dị ike ma nwee ike inye aka belata afọ ntachi, nke na-emetụta pasent 16 ruo 33 nke ndị okenye. Ọ bụ ezie na FDA kwadoro senna dị ka obere oge ...
Sophora japonica dị ilu na uto na okike. Laghachi na imeju na nnukwu eriri afọ. O nwere oru nke ikpochapu oku, ikpochapu oku, ime ka obi di ya nma na ikpochapu ogwu. A na-eji ya maka eriri afọ, ọbara na stool, hemorrhoid, ọbara ọgbụgba, okpomọkụ imeju, isi ọwụwa na dizziness. Sophoricoside ...